कांग्रेस र माओवादीलाई देशको माया छैन, त्यसैले विदेशी प्रभु रिझाउँदैछन्
२०७४ भदौ २५ आइतबार १५:०१:००
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल दश दिनदेखि मधेसमा छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पार्टीलाई पहिलो बनाउने अठोटका साथ चुनावी मैदानमा खटिएका नेता नेपालसँग आइतबार एकाबिहानै महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्काभेट भयो ।
महोत्तरीमा भेटिएका नेता नेपालसँग चुनावी सरगर्मी, दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन, उत्तर कोरिया भ्रमणलगायत विषयमा बाह्रखरीका लागि अक्षर काका र अशोक पौडेलले गरेको कुराकानी ।
केही दिनयता मधेसमा हुनुहुन्छ, २ नम्बर प्रदेशको माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ?
२ नम्बर प्रदेशमा एमालेको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएको छ । विगतको निर्वाचनमा भन्दा पनि ठूलो उत्साह छ । म हिजो सिराहा र बारामा गएँ, सात दिन रौतहटमा बसेँ, आज महोत्तरीमा छु । सबैतिर एमालेको पक्षमा आकर्षण पैदा भएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने एमाले २ नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो पार्टी हुन्छ ।
एमालेको विपक्षमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र, कतिपय ठाउँमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको समेत गठबन्धनको कुरा छ, चुनाव जित्न गाह्रो होला नि ?
तालमेल किन गर्नुपर्यो ? यसकारण कि एमाले बलियो छ । कमजोर पार्टीलाई त हराउने आवश्यकता नै पर्दैन नि ? होइन र ?
एमालेको संगठन सुदृढ छ । व्यवस्थित छ । कमजोरहरू बटुलिँदैमा, एक ठाउँमा उभिँदैमा एमाले पराजित हुँदैन ।
एमालेले तालमेलको कुरा पनि उठाएको छ, सम्भावना कत्तिको छ ?
हामी सहकार्य र समन्वयमै विश्वास गर्छौं । हामीले कसैलाई निषेध गर्ने योजना बनाएका छैनौँ । पारस्परिकतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो एमाले ।
एमाले संविधान संशोधनको विरुद्वमा उभिएकाले राष्ट्रिय जनता पार्टीले एमाले मधेसमा बढारिन्छ, छिर्न सक्दैन भनिरहेका छन् नि ?
एमालेलाई समस्या हिजो पनि थियो । ०५१ मा कांग्रेसले मलाई मुगुमा ढुंगामुढा गर्यो, ०५६ को निर्वाचनमा रौतहटमा मैमाथि साङ्घातिक हमला भयो । म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर चितवन आएको बखत तत्कालीन माओवादीले कालोझन्डा देखाउन काम गर्यो । हामीलाई कहिले अवरोध थिएन ? चुनौती नै चुनौतीको सामना गरेर यहाँ आइपुगेको पार्टी हो एमाले । अवरोध गर्ने प्रवृत्ति एउटै छ, पात्रमात्रै फेरिए, हिजो कांग्रेस र माओवादी, आज राजपा छन् । यसले केही फरक पर्दैन । एमाले शक्ति सञ्चय गरेको छ, चिरेर अघि बढ्छ ।
रह्यो कुरा संशोधनको– एमाले किन विरुद्धमा उभियो भन्ने कुरा उपेन्द्र यादवलाई सोध्नुस् । यो संशोधनको कामै छैन भनेर उहाँ भनिरहनुभएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले त देशै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका बेला एमाले विरुद्धमा गयो, त्यसैबाट एमाले मधेस विरोधी हो भन्ने पुष्टि भएको छ भनेर भन्दैछन् नि !
उहाँहरूले किन भनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा देशले बुझेका छन् । भारतमा गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भनेर आउनुभयो, त्यो पनि दुनियाँलाई थाहा छ, यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौँ ।
कांग्रेस र माओवादीलाई देशको माया छैन, जनताको भावनाको कुरा छैन । लम्पसारवादको मोह छ, विदेशी प्रभु रिझाउँदै हुनुहुन्छ । प्रभु खुसी पार्न ल्याउनुभएको हो संशोधन प्रस्ताव ।
भनेपछि संविधान संशोधन आवश्यकै छैन ?
कसले भन्यो आवश्यक छैन ? अमेरिकामा हेर्नुस्, त्यहाँ पनि संविधान संशोधन चलिरहेको छ । यहाँ पनि हुन्छ । तर, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा ।
हेर्नुस् न, संविधानमा जुन समानुपातिकको प्रवन्ध छ, यसले स्थिर सरकार दिन्छ ? त्यसले पनि संशोधन अपरिहार्य छ ।
मधेसी जनताले अधिकार पाएनौं भनिरहेका छन् नि, विद्रोह पनि भयो, संविधान स्वीकार्न तयार छैनन् ?
मधेसमा अझै ठालूहरूको राज चल्छ । म रौतहटका केही बाढीपीडित क्षेत्रमा गएँ । त्यहाँ चार गाउँ जति मुसहरले केही राहत पाएका रहेनछन् । आएको राहत तिनै ठूलाठालुले लुटलाट पार्दा रहेछन् । मधेसमा अझै जमिनदार छन् । गरिबले जमिनदारका घर हेरे भने पनि गालामा झापड हानुँलाझैँ गर्छन् । आँखा निकाल्दिन्छु भन्छन् ।
मधेसी मोर्चाले अहिले कसका लागि संशोधन गर्न खोजेको हो ? के उनीहरू मुसहरको न्यायको पक्षमा वकालत गर्छन् ? डोम, दुसाध आदिको अधिकारको कुरा गर्छन् ? नागरिकताका कुरा उठाउने उनीहरूले नागरिकताविहीन यहाँका पिछडिएका जाति, जनजातिको कुरा गर्छन् ? गर्दैनन् । एमाले नै हो उनीहरूका कुरा गर्ने ।
कसको उक्साहटमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दैछन् भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
संविधानले कसैलाई विभेदमा पारेको छैन । सबैलाई समान अधिकार दिएको छ । कतिपय देशमा अहिले पनि महिलालाई मतदान गर्न दिइँदैन । हामीकहाँ महिला कहिल्यै मताधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेन । अहिले महिला, दलित कसरी उमेदवार बन्नुभएको छ ? कत्रो उत्साह छ, यो हाम्रो संविधानको गौरवको विषय हो ।
तपाईं रौतहटबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, रौतहट देशकै गरिब जिल्ला भनिन्छ, सदरमुकामको अवस्था उस्तै छ, तराईको यो दूरवस्थाको जिम्मेवार तपाईंहरू पनि होइन ?
कसले भन्यो रौतहट देशकै गरिब जिल्ला ? पहिलो होइन, दोस्रो तेस्रोमा पनि पर्दैन, पहाडका जिल्ला पर्छन््, सबै । रौतहट चौथो गरिब जिल्ला हो । तराईका अरु जिल्लासँग तुलना गर्नुहोस् न । सर्लाहीको सदरमुकाममै पिच छैन । कांग्रेसले जनकपुर कुन हालतमा पुर्यायो । अरु जिल्लाको हालत बुझ्नूस् । तर, चन्द्रनिगाहपुर–गौर जोड्ने बाटो हेर्नूहोस्– क्या सानको छ !
तराई–काठमाडौँ जोड्ने द्रूतमार्ग कसले ल्यायो ? निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा कसले अघि सार्यो ? जनकपुरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा, ठाउँ–ठाउँमा नर्सिङ कलेज खोल्ने कुरा, तराईका विभिन्न भू–भागमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा कसले अगाडि सार्यो ? सबै विषय छर्लङ्ग छन् । भ्रमका पर्दा उघ्रँदै छन् ।
कांग्रेसका मुख्य नेता तराईमै छन्, माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटरै यतै छ, एमाले अध्यक्ष केपी ओली तराई किन आउनुभएन ?
एमालेमा योजनाअनुसार काम हुन्छ । सबै आउनुहुन्छ । चुनाव लागेको छ, नेता नआउने प्रश्नै उठ्दैन । म तराईमै छु । भीम रावल आज आउँदै हुनुहुन्छ । अरु नेताहरू पनि यतै छन् । जसको जिम्मेवारी परेको छ, उहाँहरू मैदानमै हुनहुन्छ ।
म मधेसकै हुँ । रौतहटमा जन्मिएँ, मामाघर पनि तराई नै हो । ममात्र होइन, एमाले नै तराईमा जन्मे, हुर्किएको पार्टी हो । एमालेले तराईलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तथापि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कटु वचनका कारण मधेसी रुष्ट छन् भनिन्छ, नि ?
हेर्नुहोस्, तपाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँको आशय गलत थिएन । उहाँले मधेसका जनताको आत्मसम्मानमा ठेस आउने कुरा कल्पना नै नगरेको कुरा बोल्नुहोला त ? तथ्य बङ्ग्याइयो । एमालेको नीति त्यस्तो छँदैछैन ।
एमाले मधेसमा आउन सजिलो रहेनछ, धनुषामा तपाईंलाई नै अवरोध भयो, केही ठाउँमा एमाले निषेध क्षेत्र तोकिएका छन् ।
त्यसको कुनै तुक छैन । धनुषामा हामी होइन, उनीहरू लखेटिए । मैले आधा घन्टा सानका साथ भाषण गरेँ, जनताको व्यापक उपस्थिति थियो ।
तराईमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने आधारचाहिँ के त ?
एमालेको कार्यशैली, जनताप्रतिको विश्वास नै हो । यसका कार्यकर्ता जोधाहा छन् ।
एमालेभित्रको विवाद टिकट वितरणमा छताछुल्ल भयो, चुनावको परिणाममा यसको असर देखिएला नि ?
हामी चुनावको मैदानमा छौँ । पार्टी एक ढिक्का छ । हामीभित्र कुनै विवाद छैन । एकमना एकताका साथ सूर्यध्वजावाहक उमेदवारलाई जिताउन खटिएका छौँ । अहिले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव हुँदैछ, यहाँका सबै कार्यकर्ता मैदानमा छन् । परिणामतः एमाले दुई नम्बरमा मात्र होइन, मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ ।
फरक प्रसंग– केही दिनअघि तपाईंले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका विषयलाई लिएर निकै टिका टिप्पणी भयो, फेरि पार्टीमा छलफल नै नगरी जानुभएको रहेछ नि ?
सबैभन्दा पहिला निम्ता पार्टीलाई होइन, माधव नेपाललाई आएको हो ।
दोस्रो, माधव नेपाल एक्लै गएको होइन, नेपाली सांसद्को प्रतिनिधित्व गर्दै गएको हो ।
मेरो भूमिका नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै शान्ति र सद्भाव फैलाउने हाम्रो उद्देश्य छ । शान्ति र समझदारीको वातावरण बनाउन म त्यहाँ गएको हुँ, कोरिया सरकारको निमन्त्रणामा । मैले त्यहाँ प्रष्ट भनेको छु– उत्तर कोरियाले गर्ने अनुचित कामको हामी विरोधी हौँ । कुनै हालतमा समर्थन गर्दैनौँ । उत्तर कोरिया जानुको अर्थ उसका सबै कुराको समर्थन गरिएको भन्ने त होइन नि ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि ‘उहाँ किन उत्तर कोरिया जानु भयो थाहा छैन,’ भन्नु भयो नि ?
उहाँले भ्रमणका विषयमा पार्टीलाई जानकारी छैन भन्नु भएको हो । पार्टीलाई होइन, निम्ता मलाई आएको हो ।